Accueil > Gazetin'ny nosy > Ravalomanana sy Rolly Mercia: Mifamono lolo
Ravalomanana sy Rolly Mercia: Mifamono lolo
Isaky ny miloa-bava i Marc Ravalomanana dia matetika no hita taratra ny endri-pandrahonana sy fampihorohoroany ny mpitondra fanjakana. Isan’izany ny fanambarany mivantana raha vao nesorina tsy ho mpikambana tao amin’ny governemanta intsony i Rolland Ravatomanga, ka nilazany fa « mijoro ho mpanohitra izahay Tim manomboka izao satria tsy rariny ny fifanilikilihana sy tsy fifanajana ». Tsy nasiany teny mihitsy ny lafiny hafa tokony ho fototry ny ady hevitra, toy ny lanjan’ny raharaham-pirenena amin’ny andraikitra tanana.
Misy ny fitenenany koa hoe « tsy hanaiky an’izao mihitsy aho, ary izaho rehefa miteny dia izay ». Nisy ny fotoana nilazany hoe « hataontsika araka ny fanaovana azy toy ny tamin’ny 2002… ». Farany teo dia hoe « tsy misy mafy be izany eto ».
Ny mpitondra fanjakana avokoa no iantefan’ny eritreriny amin’io fa tsy mpisehatra pôlitika hafa. Toa te hampibaribary Ingahy Ravalomanana fa « mpanao jadona izy ary tsy maintsy toavina fa raha tsy izany dia hahita raharaha aminy ».
Ren’ny fitondram-panjakana izany ka indro fa nampitenenina i Rivo Rakotovao, ary nandrangaranga « an-kolaka » ny mety tsy hahalany an-dRavalomanana ho isan’ny mpifaninana hofidiana filohampirenena… satria toa manana antontan-taratasin-keloka nanasazy azy araka ny lalàna velona ka nanaisotra taminy ny zo hofidiana. Nampitenenina koa i Voninahitsy Jean Eugène hoe « kanosa Ravalomanana fa tsy hita akory izay afitsony tamin’ny teny feno rahom-bava nataony ».
Omaly dia niaka-tsehatra ny minisitra ny Fifandraisabna, Rahajason Harry Laurent na i Rolly Mercia ka niteny mivantana fa « manao fomba fitenin’olona hampiady ny samy Malagasy Ingahy Ravalomanana tamin’ireo teny maro nambarany ». Mba raiamandreny ihany izy satria filohampirenena teo aloha, hoy i Rolly Mercia, nefa manao fomba fiteny hafahafa toa hiteraka olana eo anivon’ny fiaraha-monina.
Dia nampiaka-peo mihitsy moa i Rolly Mercia fa « raha mbola manohy ny fihetsika na fomba fiteny toa ireny dia handraisana fepetra ary hampiharina aminy ny lalàna ».
Raha jerena amin’ny ankapobeny dia tonga amin’ilay fitenenana hoe « mifamono lolo » ry zalahy. Mifandrahona. Toa bibilava sy olona.
Dia aiza ho aiza amin’izany moa ny raharaham-pirenena ?
Ny azo antoka aloha, na ny Tim sy Ravalomanana izay efa nitondra teto nandritra ny 7 taona (2002-2009) na ny Hvm sy Rajaonarimampianina izay nitondra hatramin’ny 2014 no mankaty, dia samy namela dian-tanana teo amin’ny famotehana ny firenena, teo amin’ny fammpitomboana ny fahantram-bahoaka efa navelan’ny mpitondra teo alohany rehetra.
Tena mampieritreritra ange ny tenin’ny mpandinika iray izay hoe « raha ireo efa nanana dian-tanana tamin’ny fampahantrana ny vahoaka aloha no mbola hofidiana na hampiakarina ho filohampirenena eto dia ny vahoaka malagasy mihitsy no efa tsy manana ny hasina sy toe-tsaina maha-olona azy intsony e ! »